Dilka Khashoggi oo la sheegay in madax Sacuudi ah kala socotay aalada lagu xiriiro ee Skype… – Hagaag.com
Dilka Khashoggi oo la sheegay in madax Sacuudi ah kala socotay aalada lagu xiriiro ee Skype…
Posted on 23 Oktoobar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Warar soo baxaya oo laga helay saraakiil Turki ah ayaa waxa ay sheegayaan in dilka wariye Jamal Khashoggi ee ka dhacay horraantii bishan gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul in dilka wariyaha laga hagayay internetka, gaar ahaan aaladda laga wada xiriiro ee maqal iyo muuqaalka leh ee Skype.
Saud al-Qahtani oo ah la taliyaha dhanka amniga ee qoyska reer boqorka Sacuudiga ayaa khadka Skype-ka toos ugala socday dilka wariyaha, waxaana ka hor inta aan la dilin wariyaha iyo isaga dhex maray muran caay iyo qeylo ah, wuxuuna ugu dambeyn ku wargeliyay saraakiishii dilka fulineysay in ay u” keenaan eyga madaxiisa”.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in maanta oo talaado ah uu baarlamaanka dalkaasi ka kashifi doono caddeymaha laga hayo dilka wariyaha sacuudiga Jamal Khashoggi oo isugu jira maqal iyo muuqaal.
Sucuudiga ayaa dilka weriye Jamaal Khashoggi ku eedeeyey [kuwo] fuliyey “hawlgal qaldan oo aanay amar u haysan” , hadalkaas oo ah mid dhan kale ka eegaya dhacdo dunida oo dhami ka qaylisay.
Wasiirka arimaha dibada, Caadil Al-Jubayr, ayaa u sheegay telefishanka Fox News in “dilku” ahaa “khalad weyn” waxaanu beeniyey in dhaxal sugaha taajka boqortooyada ee awoodda badani amray.
Qirashadan cusub ayaa kusoo beegmeysa xilli ay dowladda Sacuudigu horay u diiday in ay dishay wariyaha islamarkaana cadaadis farabadan uga yimid beesha caalamka.
Jamaal Khashoggi oo ahaa wariye dhaliila siyaasadda dhaxalsugaha da`da yar ee dalkaasi Maxamed Bin Salmaan.